DEG-DEG: Kai Havertz Oo Qarka U Saaran Inuu Xiddig Chelsea Ah Noqdo, Lacagta Ugu Dambayn Lagu Heshiiyay & Blues Oo Saxeexii Xagaagan Samaynaya - Gool24.Net
DEG-DEG: Kai Havertz Oo Qarka U Saaran Inuu Xiddig Chelsea Ah Noqdo, Lacagta Ugu Dambayn Lagu Heshiiyay & Blues Oo Saxeexii Xagaagan Samaynaya
Kooxda Chelsea ayaa u muuqata mid sii wadata qaabka wanaagsan ee ay suuqa xagaagan 2020 uga adeeganayaan kahor bilaabashada xilli ciyaareedka cusub ee 2020-21 iyagoo haatan horumar wanaagsan ka samaynaya saxeexa Kai Havertz.
Chelsea ayaa suuqa horeba uga heshay garabkii kooxda Ajax ee Hakim Ziyech oo 40 Milyan oo euro ugu biiray iyo waliba gool dhaliyihii RB Leipzig ee Timo Werner oo heshiis 53 Milyan oo euro ah ugu wareegay.
Muhiimada ugu weyn ee ay Chelsea soo lahayd kaddib labadaas saxeexa ayaa ahaa 21 sano jirka Bayer Leverkusen ee Kai Havertz, xiddiga ayaa la sheegay inuu hore heshiiska shaqsiga ah ula gaadhay Blues balse ay labada dhinac wada-xaajood ku jireen.
Sida uu hadda sheegayo khabiirka suuqa kala iibsiga ee Fabrizio Romano oo ah nin aad loogaga dambeeyo arrimaha dhaq-dhaqaaqa suuqa isla markaana xogtiisu sugantahay, Chelsea ayaa hal talaabo u jirta inay gacanta ku dhigto Havertz.
Fabrizio Romano ayaa sheegay in labada kooxood ay heshiis gaadhi doonaan saacadaha soo socda iyadoo Chelsea laga aqbali doono dalabkii ugu dambeeyay ee ay gudbisay.
Khabiirka ree Talyaani ayaa sheegaya in Bayer Leverkusen ay Chelsea ka helayso dalab isku geyn noqon doona 100 Milyan oo euro iyagoo marka hore 80 Milyan oo euro loo qadimi doono halka 20-ka Milyan ee kale ay shuruudo ku xidhnaan doonaan.
Hadalka Fabrizio ayaa ka dhigan in Leverkusen ay ku guuleysatay wada-xaajoodka oo ay Chelsea ka heleen dhammaan lacagihii ay dalbanayeen maadaama oo uu qandaraaska kala iibisiga xiddigu 100 Milyan oo euro ku kici doono.